Ntinye aka Apple na ume ọhụrụ nwere ike iru Japan | Esi m mac
Ntinye aka Apple na ume ọhụrụ nwere ike iru Japan
Ntinye aka nke Apple na ume ogbara ohuru amatala gburugburu uwa. N'ezie, enyela ya ọtụtụ oge maka nkwado ya na gburugburu ebe obibi. Emere usoro mbu na nhazi nke aka ya. Ma Malite na 2015, o guzobere atụmatụ ike dị ọcha na ndị na-eweta ya. Na ya 2016 akụkọ banyere soplaya ibu, ụlọ ọrụ kwuru na ya Efficiencyrụ ọrụ ike emeela ka ihe karịrị 13.800 metric ton belata carbon dioxide.
Anyị amatala elekere ole na ole gara aga na, Apple abanyela nkwekọrịta ya na onye na-ebubata ya na Japan, so akụrụngwa soplaya Ibiden. Companylọ ọrụ ahụ kwadoro Apple iji dochie ike ọkọnọ ọdịnala na usoro nrụpụta niile site na iji ume ọhụrụ.
Ike nke aga eji site ugbua gawa bu ike igwe. Nke a na - emepụta ihe karịrị otu nsogbu, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ na-ebubata ngwaahịa nwere nsogbu n'ihu: chọta ohere zuru oke maka nrụnye igwe buru ibu na mba dị ka Japan. Mana Ibiden achọtala azịza ọhụụ nke Apple.
Iji mezuo nkwa ya, Ibiden ga-etinye ego na ihe karịrị ụlọ ọrụ ikike ọhụrụ iri abụọ ọhụrụ, gụnyere otu n'ime sistemụ fotovoltaic na-ese n'elu mmiri na mba ahụ. Ewubere usoro flotation ahụ n'osisi osisi, iji mee ka mpaghara a dịkwuo elu na Japan.
Onyinyechi nwankwo, Onye osote onye isi ala Apple maka Environment, Policy and Social Initiatives, kwuru na ume dị ọcha dị mma maka azụmaahịa yana gburugburu.
Ka anyị na-aga n'ihu ntinye anyị iji mee ka atụmatụ anyị zuru ụwa ọnụ nwee ike iji 100% ume ọhụrụ, ọ dị mkpa ugbu a karịa mgbe ọ bụla na anyị nwere ike inyere ndị mmekọ anyị na-arụpụta ọrụ aka ịme otu mgbanwe ahụ gaa na isi mmalite dị ọcha, ma setịpụ ihe atụ maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Anyị nwere ike ịsị Ruo taa, na a na-ewukwasị ngwaahịa Apple ọ bụla na 93 site na ume ọhụrụ. Ọnụ ọgụgụ a dị elu karịa ndị nrụpụta ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Na mba 23, Apple ma ọ bụ ndị na - eweta ya rụpụtara 100% nke ngwaahịa ha site na iji ume ọhụrụ. Ọnụ ọgụgụ a jikọtara ọnụ, site na njedebe nke afọ, ga-eru ihe karịrị ijeri kilowatt 2,5 ijeri kwa afọ nke ume dị ọcha maka imepụta ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị maghị n'okwu ahụ, yiri iwepụ ụgbọala 400.000 n'okporo ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ntinye aka Apple na ume ọhụrụ nwere ike iru Japan
Kpachara anya maka "dummy" nke ọhụrụ MacBook Pro
Mepụta koodu QR n'ụzọ dị mfe site na QR Creator Mini